Frank Lampard Oo Qiimayn Ku Sameeyey Waxa Uu Thomas Tuchel Kusoo - Axadle Wararka Maanta
Frank Lampard Oo Qiimayn Ku Sameeyey Waxa Uu Thomas Tuchel Kusoo
Frank Lampard ayaa shaqada laga caydhiyey bishii January, waxaana beddelay Thomas Tuchel oo kooxda ku hoggaamiyey finalka FA Cup oo ay Leicester Metropolis kaga guuleysatay iyo Finalka Champions League oo ay Manchester Metropolis la ciyaari doonaan dhamaadka bishan, halka horyaalka Premier League ay soo galeen kaalinta saddexaad.
Waqtigii shaqada laga caydhinayay Frank Lampard, Chelsea ayaa ku jirtay kaalinta sagaalaad ee horyaalka, waxaana mar kaliya uu Tuchel kooxda ka dhigay mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan horyaalka Premier League iyagoo laba jeer ka badiyey Manchester Metropolis, sidoo kalena Actual Madrid ku garaacay semi-finalka Champions League.
Frank Lampard oo waraysi siinayay wargeyska The Occasions ayaa la weydiiyey farriinta uu u dirayo Tuchel, waxaanu yidhi: “Kaliya waxa aan dareemay waxa wanaagsan ee la qabtay. Marka aad yar tahay, waxaad tahay qof aad iskugu kalsoon, kaliya waxa aad doonaysaa in aad noqoto kan ugu wanaagsan, qof kastana waad la tartamaysaa.
“Marka aad qaan-gaadho ee aad xaqiiqsato in aad qabanayso shaqada tababarenimo ee Chelsea, waxa laga yaabaa in aanad dhamaysanin, anigana sida kaliya ee aan muddo dheer kusii joogayay iyo dhab ahaan in aan si wanaagsan wax u qabto, waa in aan sida ugu habboon u shaqeeyo, dadkana u muujiyo ixtiraam.
“Waxa aan xasuustaa markii uu Tuchel ka tegayay PSG laba bilood ka hor, in garoonka tababarka oo aanu ku haysanay ciyaartooyo badan oo Faransiis ah iyo kuwo ku hadla Faransiiska, in uu isagu yimid Chelsea. Anigu lama kulmin. Waxa kaliya ee aan sameeyey waxay ahayd in aan nasiib wanaagsan u rajeeyey sababtoo ah waa kooxdaydii aan muddada dheer usoo ciyaaray ee aanan soo tababaray.
“Wali xidhiidh ayaan la leeyahay shaqaalaha, waxyaabaha aan ka maqlayaana waa kuwo aad u togan, waanay iska caddahay in uu tababare sare yahay.
“Waxa aan qiimeeyey hadalladiisii toddobaadkii hore, aniga ayuu i amaanay qaybtii hore ee xilli ciyaareedka, aniguna amaan waan amaanayaa sababtoo ah waxa uu soo gaadhay laba closing iyo afarta sare oo ay ku tartamayaan, waa guul aad u weyn oo uu gaadhay tababare sare. Waan ku farxi lahaa inaan la kulmo.”
RASMI: Arsenal Oo Shaacisay Heshiis Ay La Gashay Leo Messo